Grenoble (/ ɡrənoʊbəl /;  Faransiiska: [Aristide: Grenoblo] waa magaalo ku taala koonfur bari ee Faransiiska, lugta labaad ee Faransiiska Alps halkaasoo webiga Drac uu ku biirayo Isère. Waxaa ku yaala gobolka Auvergne-Rône-Alpes, Grenoble waa caasimadda Isre  waana xarun cilmi baaris oo muhiim ah oo Yurubta   Magaaladu waxay ku dhawaaqday in ay tahay "Capital of the Alps", iyada oo ay sabab u tahay xajmiga iyo u dhowaanshaha buuraha.
Taariikhda Grenoble waxay soo noqotay 2,000 oo sanno, ilaa markii ay ahayd tuulo yar oo Gallic ah. Wax yar ayay ku heleen caasimadda Daufiné  qarnigii 11aad, laakiin Grenoble waxay ku jirtay inta badan taariikhdeeda oo ah magaalda xagjirka ah iyo garrison ee xuduudaha boqortooyada France.
Horumarinta warshadaha ayaa kordhay kor u kicinta Grenoble iyada oo loo marayo dhowr marxalado dhaqaale ah saddexdii sano ee la soo dhaafay. Tani waxay ka bilowday warshad cufan oo dhaadheer qarniyadii 18aad iyo 19aad, sii waday horumarinta warshad koronto oo xooggan dhammaadkii 19aad ilaa qarnigii 20-aad, waxayna ku dhammaatay dagaalkii labaad ee dagaalkii labaad ee adduunka ee dhaqaalaha X Ciyaaraha Olombikada ee 1968. Magaaladu waxay noqotay mid ka mid ah midka ugu muhiimsan cilmi baarista, tiknoolijiyada iyo xarumaha hal abuurka ee Yurub, iyada oo qof kasta oo ka mid ah shan degan oo si toos ah uga shaqeeya goobahaas.  
Dadweynaha magaalada (Iskoolada) ee Grenoble wuxuu ahaa 160,215 tirakoobka 2013, halka dadka reer Grenoble ee ku yaalla magaalo weynta (Faransiiska: Aerosun urbaine de Grenoble ama "agglomération grenobloise") waxay ahayd 664,832. Dadka deggan magaalada ayaa loo yaqaan "Grenoblois".
Deegaanno badan oo ku yaalla meelo kale oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn waxaa ka mid ah saddex qof oo ka badan 20,000: Saint-Martin-d'Hères, Échirolles, iyo Fontaine.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Grenoble&oldid=182536"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Oktoobar 2018, marka ee eheed 09:28.